I-Toxoplasmosis - Izingozi, ukuthintela kunye nemiqondiso yesifo
Indlela i-toxoplasmosis ibonisa ngayo ikati
Indlela i-toxoplasmosis ebonakalisa ngayo abantu
Iingozi ze-toxoplasmosis ekukhutheni
I-Toxoplasmosis isifo esithathelwanayo esinoyike ngakumbi ngabanikazi bekati abakhulelweyo. Ngenxa yokuba i-pathogen ejongene nesi sifo, esinegama elithi Toxoplasma gondii, lichaphazela ikati yasekhaya kwimijikelezo eyahlukeneyo yentsholongwane. Kwimijikelezo yesifo, inokudluliselwa kubantu. Kwabesetyhini abakhulelweyo kunye nabantwana abangakazalwa, ngenxa yabantu abanesistim somzimba esibuthathaka, iintsana, abancinci kunye nabalupheleyo, oku kubonakalisa umngcipheko wempilo ngenxa yokuba iziphumo ezidlulileyo zingenzeka.
Uphuhliso lwe-toxoplasmosis pathogen Toxoplasma gondii
I-Toxoplasma gondii yi-parasite yomhlaba wonke onokuphindaphinda ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ukutshintshwa ngokuthe ngqo ukusuka kumgca omnye wokuphela ukuya kwelinye kunokwenzeka.
Ulwazi malunga ne-toxoplasmosis
Oku kudla ngokuba yikati. Ukuba isilwanyana esele sitheleleke sishiya kunye nemifuno ehluma ii-oocysts, oku kungathathwa ngamanye amakati.
Ngethuba leenkqubo zokugaya inyama, i-sporozoites eyayingasasebenzi ikhutshwe, emva koko ihambela udonga lwamathumbu, bese ingena kwigazi okanye i-lymph kwaye ihanjiswa kunye nala manzi ahlukeneyo kumalungu kunye nezicubu.
Kulapho, i-sporozoites kwi-vacuoles yeeseli zomzimba inokuvelisa i-asexually. Ifompho iTrophozoites. Ngenxa yokuba isityalo esichaphazelekayo siphumelela ngokukhawuleza abahlaseli ngokukhawuleza, senza izixhobo zokulwa nezifo ezenza ukuba ii-infathogens zifakwe kwi-cyst form. Kule mijelo, kunjalo, iigciwane ziyanda kwakhona. Ngoku kuthiwa yi-sporozoites.
"Indlela" ye-toxoplasmosis pathogen
Emva kweentsuku ze-18, i-sporozoites iphinda ibuyele emathunjini kwaye yande ngokukhawuleza. Icandelo le-pathogen elitsha lifakwe kwii-oocysts kwaye lidityaniswe kwizilwanyana. Oku kuyafumaneka kwimikhosi emitsha.
Nangona kunjalo, ukuba ummangali ophakathi ubandakanyekile kumjikelezo, le ngxwaba ekhulelwe ngamagciwane, athatha ikati kuye. Inkambo eqhubekayo yokuphuhliswa kwegciwane ifana nomjikelezo okhankanywe ngawo. Kwakhona, ukungena kwamanzi angcolileyo kungabangela ukuba ikati ifuthe.
Ingxaki yesithathu yokusabalala ngumjikelezo wangaphakathi-host host-host. Apha, ukutshintshwa kweentsholongwane ukusuka kwelinye lamashishini angena kwelinye ukuya kwelinye kwenzeka. Oku kunokwenziwa, umzekelo, ngokutya inyama eluhlaza ekhutshwe yi-Toxoplasma gondii. Kwakhona kunokwenzeka ukudlulisa iintsholongwane ezivela kumama ngekhekhe lomama kumntwana ongakazalwa.
Akunjalo onke amakati aphethwe yi-Toxoplasma gondii athuthukisa i-toxoplasmosis. Kunoko, kuxhomekeke kwinqanaba leentsholongwane.
Ukuba isifo sisesigxina sokugqibela-i-endometrial, isifo siphuma malunga neepesenti ze-16 zezilwanyana. Ukuba iintsholongwane zingena emzimbeni ngokusebenzisa umjikelezo wangaphakathi-host-endwirt, ubuncinane i-97 ipesenti yeekati zigula.
Ngokuqhelekileyo akukho zibonakaliso zokugula zibonakala kwiinkati ezigulayo. Ngokuqhelekileyo kwaye kuphela ngexesha lokusasazeka kweentsholongwane emathunjini unokhendi kunye / okanye ukuhlanza kwenzeka.
Ukuba iziphathamandla zangaphakathi zichaphazelekayo, ukukhwehlela, impumlo yebhola, ukuphefumula okufutshane, imoto okanye izifo ze-neurological okanye i-jaundice iyakwenzeka ngokuxhomekeka kwinqanaba le sifo. Ukuba izifo ezigulayo, ezibuthathaka kunye nezilwanyana zihlaselwa, isifo sinokubulala.
Emva kokuba usulelo luye lwahlulwa, iikati zivame ukuzivikela kwi-toxoplasmosis-pathogens ebomini babo. Izilwanyana ezinobuthathaka kuphela zihlala zigula.
Phantse zonke iintsholongwane ze-toxoplasmosis ebantwini zingenazo iimpawu. Nangona kunjalo, eso sifo sinokuthi senzeke kwizithuba kwaye siphume iinyanga okanye iminyaka kamva. Iipesenti ze-10 kuphela zalabo bachaphazelekayo bavele babonise iimpawu. Ezi zinokuba ngumkhuhlane omncinci, intloko yesifo kunye nomzimba okanye i-lymph node. Ukunyangwa kwesi sifo kubantu abanobucala bengafunwa.
Ukuba umzimba unobuthakathaka, unokukhokelela kumonakalo owenziwe ngamalungu. Okuchaphazelekayo kaninzi kunengqondo, ukwenzela ukuba ngenxa yoko, ukukhubazeka okanye utshintsho lomntu lwenzeka. Kwakhona kunokwenzeka ukuba imiphunga okanye i-meningitis, leyo ingasongela ubomi. Kuyafana oku kubantwana, abantwana kunye nabantu abadala. Ngoko ke, unyango lweziyobisi lwamaqela luboniswe.
Abasetyhini abasele bafumana isifo se-toxoplasmosis baneentsholongwane ezichasene nezifo. Ngaphandle koko, ukusuleleka kuyingozi, ngakumbi kwi-sibini yesibini yokukhulelwa, njengoko kunokukhokelela kumathambo kunye nomonakalo omkhulu kumntwana ongakazalwa.
Ngokomzekelo, umonakalo wentliziyo, umphunga okanye ingqondo ingenzeka. Unyango olukhawulezayo lomama osulelekileyo lufunekayo ngokukhawuleza ukwenzela ukuba imiphumo yesikhathi eside ingafumaneka. Oku kwenziwa ngonyango olude olujoliswe kulo elide elide elijoliswe ekupheleni kokukhulelwa.
Ukuze kuncitshiswe umngcipheko wosulelo, ukusetyenziswa kwemveliso ebomvu kunye ne-offal kufuneka kugwenywe. Abanikazi bamagumbi kufuneka banakekele ukuba izilwanyana azikwazi ukufikelela ngqo kwizicwangciso. Ukucocwa rhoqo kwebhokisi le-litter kwakunye nokulahla okungenakubungozi kwemfesi kuqinisekisa ukuba nayiphi na intshukumo yokuphazamiseka iphazamisekile.
Xa kuziwa ekugcineni iikati, ukunakekelwa kufuneka kuthathwe ngokubanzi. Oku kubandakanya ukungafihlisi rhoqo kwendawo yokulala yendawo kunye neendawo ezikuyo. Ukongeza, iikati akufanele zifikelele ekudleni. Emva kokubetha isilwanyana, kufuneka uhlambe izandla. Amakati akufanele avunyelwe ukulala kwiibhedi zabanini bawo. Ingakumbi abantwana kufuneka bafundiswe le migaqo yokuziphatha ngokukhawuleza.